नाममात्रको अनुगमन | चितवन पोष्ट
गृह » नाममात्रको अनुगमन
— डीलकुमारी नेपाल
भरतपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चितवनमा हरेक दिन अनुगमन भएको छ भन्नु नै अहिले गलत सावित हुन गएको छ । बारम्बार अनुगमन गरी दुःख दिने नाममा चर्चा कमाएका अनुगमन टोली साना पसलहरुमा मात्र घुम्ने गरेको फेला परेको देखिन्छ । अनुगमनमा परेकाहरु भने चितवनका विभिन्न नाम चलेका सेकुवा पसल र रेस्टुरेन्टहरुका लागि अनुगमन गर्ने अनुमति नै नभएको हो कि ? भन्ने गुनासो गर्छन् । सर्वसाधारणका साना किराना पसलहरुमा गई अनुगमन गरेको निहुँमा सरकारी कामकाज देखाउनेहरुका लागि अब कसले बोलिदेला ? भरतपुरको बाइपास रोडमा रहेको एक पसलका एक प्रतिनिधिले गुनासो गर्छन् । उनको कुरा छ, हामीले पानी बेच्दा थुन्न लग्छन्, रेस्टुरेन्टहरुमा रातिसम्म महँगा परिकार बेच्दाचाहिँ अनुगमनकर्ता कहाँ जन्छन् ? खै त अनुगमन ? के खुद्रा पसलमा मात्रै हो अनुगमन गर्ने ? उनीजस्ता अरु धेरैको यस्तै प्रकारको आक्रोश छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा खबर बन्ने गरेका छन्, ठूला–ठूला होटलहरुमा १८ रूपैयाँको पानीलाई ७० रूपैयाँसम्म असुलउपर गरिएको भन्नेबारे । आखिर यसको अनुगमन कसले र कहिले गर्ने हो ? साँचो कुरा के हो भन्नेबारेमा उपभोक्ताहरुले अब जान्न पाउनुपर्छ । त्यस्तै, चितवनमा रहेका पाउरोटी कारखानाहरु यतिबेला हेर्न नहुने अवस्थामा पाइएको छ । नीति र नियमलाई नहेर्ने अनुगमन टोली यतिबेला कहाँ छन् ? केहीलाई लगी थुन्ने अनि कसैलाई भने बेवास्ता गर्ने गरिएका उदाहरणहरु छन् । कतिपय पाउरोटी कारखानाहरुमा त चरम बालश्रम शोषण नै भएको छ । फोहोर तेलहरुबाट बनेका पाउरोटी, पपजस्ता खानेकुरा खाँदा बिरामी पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । सरासर यस्ता कारखानाप्रति पनि अनुगमनकर्ताको ध्यान नजानुमा केही कारणहरु अवश्य पनि छन् । पक्कै पनि यसमा केही रहस्य हुनुपर्छ भन्छन्, स्थानीय बासिन्दाहरु । अब सबैका लागि समान व्यवहार गर्न अनुगमनकर्ताहरुको ध्यान कहिले जाला ? भन्ने प्रतीक्षामा छन् आमउपभोक्ताहरु ।
कार्यक्रमबारे पत्रकारलाई पूर्वसूचना दिनु राम्रो